Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kamid ah musharixiinta doorashada 2021-ka ayaa ka hadlay go’aanka ay qaateen dowlada iyo dowlad goboleedyada ee ku aadan doorashada iyo eedeymaha ay u jeediyeen mucaaradka iyo golaha maamulka.
Xasan wuxuu sheegay in dalku uu hada kala jabay laakiin aan loo baahnayn in la abuuro qodobo kala qoqob ku ah oo wax u dhimaya midnimada, wadajirka iyo dowladnimada Soomaaliya oo in muda ah soo shaqaysay.
Dowlad gobaleedyada kala taabacsan Hir-shabeelle, galmudug iyo koofur galbeed ayaa uu sheegay in aysan matalin shacabka ay hogaaminayaan, maadaama ay daneynayaan in la wada aqbalo doorasho.
Walaalayaal, dalkani hadda wuu kala qaybsamay, Gobaladda Waqooyi ayaa innaga maqan oo waxay leeyihiin keli ayaan is-taagnay oo in muddo ah ayaan wada hadallo raadinaynay, qaar kalena waxay leeyihiin macquul ma aha in maanta sabab kale la abuuro oo berrito la yidhaa gooni ayaan u taaganahay Waxay dhaawaceysaa nidaamka dalka. ” , midnimada ummadda iyo dowladdeenna ” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhanka kale, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed aysan isku mid ahayn oo qaarkood ay bililiqeysatay dowladda federaalka, wuxuuna uga digay madaxweynaha Soomaaliya inuu adeegsado ciidamo sida uu yiri.
Hogaamiyaha Soomaaliya Maxamed C / llaahi Farmaajo ayaa sheegay in loo wareejiyay dal wadaag ah, laakiin haddii la wareejinayo ay tahay inuu raaco wadadii shalay lagu heshiiyay.
“Haddii doorashadii shalay lagu shubtay qoryo iyo xoog, taasi way ka duwan tahay, aan is dejino oo aan wada hadalno, madaxweynaha dalkan oo aan is khilaafsaneyn doodna aysan ka dhexeeyo ayaa loo dhibay, doonaya inuu go’aan midaysan ka qaato, waa loo dhiibay, dib inuu u fadhiisto oo uu diido in uu la hadlo dadka, Xal uma noqon doonto saamileyda, waana in uu fuliyo balanqaadkiisii ​​ahaa inuu noqdo oday Soomaaliyeed. ” Sidaas waxaa yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada Galmudug, Koofur Galbeed & Hir-Shabeelle oo horey u diyaariyey xubnaha Guddiyada doorashada ayaa shaaciyey inay qabanayaan doorashooyin aysan ku jirin dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
Diary Sow, “best student in Senegal”, when